CAS na-ere ọkụ: 125541-22-2,1-N-Boc-4- (Phenylamino) piperidine
Aha bekee: tert-butyl 4-anilinotetrahydro -1 (2H) -PYRIDINECARBOXYLATE
Aha Bekee: 1 - Piperidinecarboxylicacid, 4 - [(4 - fluorophenyl) amino] -, 1, 1 - dimethylethyl ester
Ọnụ ahịa ezi uche na nnyefe ngwa ngwa DL-BANTHIONINECAS: 59-51-8
DL-methionine sitere na mmanya na-aba n'anya na kristal kristal ọcha ma ọ bụ ntụ kristal, dị ụtọ nke ukwuu, nwere isi pụrụ iche. Enweghị ntụgharị anya ọ nwere ike ịgbaze na mmiri, tụgharịa acid na alkali, ntakịrị soluble na mmanya 95%, anaghị agbaze na ether.
Aha Bekee: N- (4-fluorophenyl) piperidin-4-amine
CAS dị ọnụ ala: 1451-82-7
Aha bekee: 2-bromo-4 '-methylpropiophene
[Ebe na-agbaze]: 75-77 ℃
Ọnụego ọkụ: 273 ℃
[Isi ọkụ]: 59 ℃
Aha Bekee: 4-Piperidone Monohydrate hydrochloride
Usoro kemịkal: C5H10NO
Ibu arọ nke 100.138
Ebe gbazere: 89-99 ℃
Ebe a na -agba mmiri: 175.1 ° C na 760 mmHg
Igwe ọkụ: 84.6 Celsius
Nnyefe ngwa ngwa nke nlele AD18 dị elu
Usoro kemịkal: C10H16N
Ibu molekul: 150.24
Na-ere ọkụSodium dichloroisocyanurateCAS: 2893-78-9
Aha bekee ： sodium dichloroisocyanurate
CAS Mba. 2893-78-9
White ntụ ntụ soluble na mmiri, nke a na -eji dị ka ọgwụ nje,
enwere ike iji ya maka ọdọ mmiri, mmetọ mmiri ọ ,ụ ,ụ, ọgwụ mgbochi na ebe dị iche iche nke mmetọ gburugburu ebe obibi.
Onye nrụpụta wetara CAS: 5413-05-8, Ethyl 3-Oxo-4-Phenylbutanoate
Ngwa: ethyl 2-phenyl acetoacetate bụ ihe ester organic, nke enwere ike iji ya dị ka ndị na-eme ọgwụ.
Nnukwu ịdị ọcha 99%CAS: 148553-50-8, PREGABALIN
Pregabalin bụ agonist ma ọ bụ onye na-emegide ihe na-abụghị gamaminobutyric acid (GABA). Ọ bụ modulator ọwa calcium ọhụrụ nwere ike igbochi ọwa calcium na-adabere na voltaji ma belata mwepụta nke neurotransmitters.